NGO Forum - Nepal - पानी कि विष ? NGO Forum - Nepal - पानी कि विष ?
पानी कि विष ?
विगत एक महिनादेखि यटखा तम्मोगल्लीभित्र ढल मिसिएको गन्हाउने पानी आइरहेको छ । हिजो विहीवार विहान ५ बजेदेखि ९-१० बजेसम्म ढल मिसिएको गन्हाउने पानी धारामा आइरहेको थियो । यस्तो पानी पठाएर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको र्सवविदितै छ । काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)मा उजुरी गर्न गयो काउन्टरका मान्छेबाहेक कोही भेटिदैन केयूकेएलले गर्न खोजेको के हो ? सरकार चट्टानझै मूकदर्शक भएर हेरिरहेको छ ।
सरकारले यसमा केही चासो देखाएको छैन । यस्तो नियमित नभई नहुने पानीदेखि लिएर दैनिक प्रयोगमा आउने खाद्यवस्तुहरुमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नु नि ! जुनसुकै सरकार आएपनि टिम खडा गर्छैन । टिम खडा गरेसम्म समाचार सुनिन्छ तर कार्यान्वयन गरेको समाचार कमै सुनिन्छ । बर्सपिच्छे सरकार फेरिन्छ तर जुनसुकै सरकार आएपनि अवको पाँच वर्षछि पानीको छेलोखेलो हुन्छ भनी नानाथरीका भाषण छाँटने कामचाहि हुन्छ तर कार्यान्वयन हुने दिन कहिले आउँदैन यो भाषण त वीस वर्षदेखि सुनेको भाषण हो ।
केयूकेएल यतिसम्म लाचार छ कि विभिन्न पत्रपत्रिकामा नियमित खानेपानीको महसुल तिरौ भनेर विज्ञापन दिएको हुन्छ तर पानी भने नियमित पठाउनुपर्छ भन्ने दिमागमा किन आएन ? त्यो विज्ञापनको पौसा पनि हामीबाटै नै असुली गरिरहेको छ । अब त हामी आफै सचेत भएर धर्ना दिएरु भएपनि यस्ता दूषित पानी पठाएवापत उल्टै केयूकेएलले जनताको अदालतमा जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम बनाउने कि ? यी नेताहरुले देश र जनताको लागि केही गर्नुर् छन । खाली एकआपसमा झगडा गर्यो दिन काटयो भत्ता पकायो । के नै गरेका छन जनताका लागि यी नेताहरुले ?
- सरिना महर्जन, सुमन जोशी तथा १९ र २६ वडाका बासिन्दा, काठमाडौ
स्रोत : अन्नपूर्ण पोष्ट, ०६७ माघ ७, पेज नं. ८